Ny Tontolon’ny Bilaogy Kenyana Amin’ity Herinandro Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 16:51 GMT
Manana fandalinana mahaliana mikasika ny zava-mitranga ao Amerika i Sidaki ary manao tsoakevitra fa anisan'ireo zavatra mampisalasala ny Amerikanina ny andraisana azy eo amin'ny taniny ny omby Britanika, ny akoho Britanika, ary vao haingana, ny lehilahy Kenyana iray mpanao politika, Christopher Murungaru, izay vao volana vitsy monja ihany koa izay no nampahafantarin'ny fanjakana Britanika fa tsy tiany handoto ny varavarany ity farany.
Nitotonganana ny kintan'i Murungaru taorian'ny nahavoarohirohy azy tamin'ilay raharaha maloto nalaza be antsoina hoe “Anglo Leasing”, andian-tolotra nataon'ny fanjakana izay niafara tamin'ny raharaha fanodikodinam-bola, izay nampitombo mihoam-pampana ireo sarany sy ny tsolotra eo amin'ireo manamboninahitra taloha teo amin'ny fanjakana sy ny amin'izao fotoana ary ireo olona maizina izay tsy mbola nabaribary mihitsy. Minisitry ny Filaminana Anatiny i Murungaru tamin'izany fotoana, izay toerana nifotoran'ny adihevitra tamin'izany.
Teo ambanin'ny tsindry tsy mitsaha-mitombo na avy ao anatiny na ivelan'ny sisintany, nafindran'ny Filoha Mwai Kibaki toerana izy, nanome azy ny toerana ambany indrindra tao amin'ny Fitaterana tanatinà hetsika noheverin'ny maro ho misabaka amin'ny fanaovana sorona ny iray amin'ireo Lietnà-ny sy ny fampitoniana vahoaka izay mitady rà latsaka ao anatin'ny ady manohitra ny kolikoly, hetsika iray tsy inoan'ny vahoaka fa ilofosan'ny Fanjakana.
Mbola ela vao hitobaka ny kapoaka mangidin'i Murungaru. Manakaiky ilay fandraràna Amerikanina ireo tatitra fa eo am-panamarinana ihany koa ny Firaisambe Eoropeana fa ”Mihazona ny zo hampiditra ny Fitantanana”.
Mandoko am-pahatsorana ny faniriany hanambady sy hanan-janaka Rtoa K, fangaro tsara eo amin'ny nofinofy sy ny zavamisy.
Mavitrika kokoa momba ilay fihatoan'ny fifamoivoizana nateraky ny Hazakaza-davitra Iraisampirenena natao tao Nairobi fataon'ny Standard Chartered isan-taona i Bankelele ary nankahery ireo mpandray anjara, indrindra ireo tena nihazakazaka.
Manana fanomezam-boninahitra mety tsara, tena mampihomehy ho an'andriambavilanitra iray tena miavaka, sady malaza be i Udi, izay hita tao anatin'ny fiainany ary manana endrika mifanaraka ao anatin'ilay tantara.
Mahatsiaro ireo namana lasàna sy ny hasarotry ny fiatrehana izany avy eo i Fishtears, izay manoratra bilaogy avy ao Botswana.
Tonga saina i Mutimua fa tratry ny fiankinan-doha mahery vaika tsy nahy amin’ny fanoratana bilaogy koa izy.
Manontany tena izay mba niafaran'i Winnie Mandela, vady teo aloha an'ilay olona goavana izay atao hoe Nelson Mandela, i Wanjiru.